नियमित स्तनपान गराउँदा यसरी घट्छ महिलाको तौल | Rajmarga
नियमित स्तनपान गराउँदा यसरी घट्छ महिलाको तौल
पौष्टिक आहारका कारण होस् वा जंकफुड खानाले होस् हिजोआज बच्चाहरुको तौल आवश्यकभन्दा बढी हुने गरेको छ। आफ्नो आमाको दूध राम्ररी खान नपाएका भए पनि बालबालिका बजारमा पाइने विभिन्न आहार खानाले मोटोघाटो देखिने गरेका छन्।
अझ विकसित मुलुकमा बच्चा त मोटोपन मुख्य समस्या नै बनेको छ तर, अनुसन्धान के भन्छ भने जुन बच्चाले लामो समयसम्म आमाको दूध खान पाएको अर्थात स्तनपान गर्न पाएकोछ उसमा मोटोपनको सम्भावना निकै कम हुने गर्दछ ।
हालै जापानमा गरिएको एक अध्ययनले सो कुरा पुष्टि गरेको हो । ४३ हजार बच्चामा गरिएको अध्ययनअनुसार जुन बच्चालाई ६ महिनासम्म ‘एक्सक्लुसिभ ब्रेसफिडिङ’ गराइन्छ, त्यो बच्चामा मोटोपन हुने सम्भावना १५ प्रतिशत कम हुन्छ बरु बलियो, दह्रो र फुर्तिलो हुन्छ । अनुसन्धान भन्छ–बच्चाको मात्रै होइन आमाको स्वास्थ्यमा समेत फाइदाजनक हुन्छ ।
अनुसन्धानले लामो समय आमाको दुध खाने बच्चाको पेटमा समस्या, संक्रमण तथा एलर्जी हुने सम्भावनाबाट बचाउँछ । अध्ययनमा सात–आठ वर्षका कम तौल भएका बच्चा, सामान्य तौल भएका बच्चा र बढी तौल भएका बच्चा समावेश गरिएको थियो।
नवजात शिशुकी आमाले अधिक दुध पिलाइन् भने उसको आइक्यु अन्यको तुलनामा बढी हुने पनि पाइएको छ। अमेरिकाको बोस्टन चिल्ड्रेन अस्पतालमा गरिएको अध्ययनले सो तथ्य पत्ता लगाएको हो । अध्ययनअनुसार आमाको दुधमा बच्चाका लागि चाहिने सबै प्रकारका पोषकतत्व हुन्छ । अझ बच्चा जन्मेको ६ महिनासम्म आमाको दुध नै सबै खालको आहार हुन्छ । दुधबाहेक पानी पनि खुवाउन पर्दैन । जुन बच्चाले त्यसरी आमाको दुध पिउँछ उसलाई विरामी हुने सम्भावना कम हुन्छ । र, दिमाग पनि तेज हुन्छ ।
अध्ययनका अनुसार जन्मेको एक वर्षसम्म स्तनपान गर्ने बच्चाको आइक्यु सात वर्षसम्म आफ्नो उमेरका बच्चाको तुलनामा निकै तेज हुन्छ । त्यस्तै स्तनपान गर्ने बच्चाले भाषासमेत छिटो सिक्छन् । जुनसुकै भाषा आफ्नो शब्दमा बोल्न र सिक्न सक्छन् । यस्तो बच्चाले भविष्यमा भाषासम्बन्धी गल्तीसमेत कम गर्छन् । एजेन्सी
Previous post: तपाइलाई पैसाको अभाव भइरहेको छ ? यी ९ वटा गल्तीहरु गरियो की !
Next post: एमाले–माओवादी पार्टी एकता प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्केपछि मात्र